About Us - I-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
I-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd iyinkonzo ebanzi yokuhlinzekela ukuphathwa kwamandla ngokuphathwa kwe-smart energy njengebhizinisi layo eliyisisekelo, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuma eyodwa njengemishini yokulinganisa, imishini yokuxhumana, isoftware yefu, ukuhlanganiswa kohlelo, ukusebenza kohlelo nokulungiswa okuhlobene namandla ukulinganisa kanye nokuphatha.
Le nkampani yenza isokhethi lokulinganisa smart, isokhethi elonga amandla, umugqa wamandla, imitha yamandla kagesi smart, imitha ye-DIN-reli eyi-smart energy energy metres, imitha yamandla kagesi ekhokhwe ngaphambili, ishumeki yemishini yamandla esebenza ngogesi, imishini yokuhlola indawo , Ithuluzi ledijithali elenziwa ngemisebenzi eminingi, imitha yamanzi, i-terminal, i-DTU, i-RTU, umshini wokuphatha ukugxila kokuqoqwa kwemininingwane kagesi, kanye nekhambi lobuchwepheshe lemikhiqizo engenhla.
Inkampani ineqembu lezinsizwa ezisezingeni eliphakeme, eliqeqeshiwe, elisezingeni eliphakeme lobuchwepheshe kanye nokulawulwa kwe-backbone.Inhlangano yinhlangano egxile esifundweni egqugquzela ukufunda emsebenzini, ukusebenza ekufundeni, nokugcizelela intuthuko engaphezulu nsuku zonke.
I-Innovation ukuphishekela okuphakade kwabantu abasindisayo, ngobuchwepheshe bokuqamba intuthuko, ukuphathwa kwezinto ezintsha zokuzuzisa, ukuma okuhle, ubuciko, imicabango ehleliwe yokuphatha ngaso sonke isikhathi kumklamo womkhiqizo, ukukhiqiza, insizakalo yamakhasimende, njll. izinga lenkonzo yokuqala.
I-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd. ihlala inamathela kwinqubomgomo yokusebenza esekwe kwezobuchwepheshe futhi ethambekele emakethe, futhi ihlonipha nefilosofi yebhizinisi "yokwakha ukudala, ukwabelana, inqubekelaphambili, kanye nezinzuzo ezihlangene". Umsebenzi wethu ukugxila ekuphathweni kwamandla kanye neqhaza ekongeni amandla nasekunciphiseni ukukhipha amandla.I-tenet yethu iwukuba ngumhlinzeki wesevisi weqembu lokuqala emkhakheni wokuphathwa kwamandla we-smart. Ukhumbula umqondo wemiphumela ethembekile ne-win-win, sithembisa ukuletha imikhiqizo nezinsizakalo ezingcono kuwo wonke amaklayenti. Lonke ilunga enkampanini yethu libheka ukuvela kwezinto ezintsha njengokuphishekela kwabo okuphakade. Sizohlala, sidlala ngokugcwele izinzuzo zethu kwezobuchwepheshe emkhakheni wokulinganisa amandla nokuphatha ukusiza amakhasimende ethu ukufeza izinhloso zokusebenzisa amandla esayensi, ukonga amandla kanye nokunciphisa ukusetshenziswa. Ngokwenza lokhu sizokwenza umnikelo wethu emphakathini osindisa izinsiza kanye nomphakathi onobungane nemvelo.